ပင်မစာမျက်နှာ United Kingdom ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ အင်္ဂလိပ်ဘောလုံးကစားသမားများ Jadon Sancho ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
LB "အကောင်းဆုံးအမည်ပြောင်အားဖြင့်လူသိများသူတစ်ဦးဘောလုံးပြိုင်ပွဲ Genius ၏အပြည့်အဝပုံပြင်တင်ဆက်အဆိုပါဒုံးပျံ"။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Jadon Sancho ကလေးဘဝပုံပြင်ပေါင်းမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့သူ့ရဲ့ကလေးဘဝအချိန်ကနေယနေ့အထိသည်သင်မှတ်သားလောက်ဖြစ်ရပ်များတစ်ဦးအပြည့်အဝအကောင့်ဆောင်ခဲ့ရမည်။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည်သူ၏အစောပိုင်းဘဝ, မိသားစုနောက်ခံ, ကျော်ကြားမှုမတိုင်မီဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိပါဝင်ပတ်သက်, ကျော်ကြားမှုပုံပြင်, ကြားဆက်ဆံရေးနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝစသည်တို့မှထမြောက်
ဟုတ်ပါတယ်, လူတိုင်းဘွန်ဒစ်လီဂါ၌သူ၏လျင်မြန်မြင့်တက်အကြောင်းကိုသိတယ်။ သို့သျောလညျးကိုသာအနည်းငယ်အတော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်သော Jadon Sancho ရဲ့အတ္ထုပ္ပတ္တိစဉ်းစားပါ။ အခုဆိုရင်နောက်ထပ် ado ခြင်းမရှိဘဲ, ရဲ့ Begin ကြကုန်အံ့။
Jadon Sancho ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts- ဘ0အစပိုင်း
Jadon Malik Sancho သူ့မိဘ Camberwell အတွက်မစ္စတာနှင့်မစ္စ Sean Sancho, တောင်လန်ဒန်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းမှမတ်လ 25 ၏ 2000th နေ့၌ဖွားမြင်ခဲ့သည်။ မိမိအရူပထံမှတရားစီရငျ, သငျသညျကိုသူအပြည့်အဝမယ့်ဗြိတိန်ကားရောထွေး-ပြိုင်ပွဲနောက်ခံမှမဟုတ်သိကြပါလိမ့်မယ်။
တကယ်တော့ Jadon Sancho ရဲ့မိဘများထရီနီဒက်နှင့်တိုဘာဂိုကနေဖြစ်ကြသည်။ နှစ်ဦးစလုံးဟာသူတို့ရဲ့သားရှိသည်ဖို့အင်္ဂလန်ကိုပြောင်းရွေ့ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါတယ်။ ဤအချက်ကို Jadon Sancho ရဲ့မူလအစနှင့် ပတ်သက်. မှတ် buttresses ။
Jadon Kennington ခရိုင်တောင်ပိုင်းလန်ဒန်မြို့တွင်ကြီးပြင်းခဲ့သည်။ သူ့နှမနှင့်အတူကြီးပြင်းသူ Northwood တည်ရှိသော Harefield အကယ်ဒမီ (သို့တက်ရောက်ခရစ္စတယ်ဘောလုံးကလပ်၏နေအိမ်ဧရိယာ) လန်ဒန်။ ကျောင်းနေစဉ်, ဘောလုံးများအတွက် Jadon ရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုကသူ့ကိုသူအားကစားကာလအတွင်းအပြိုင်အဆိုင်ဘောလုံးကစားရန်အခွင့်အလမ်းတယ်ဘယ်မှာသည်သူ၏ဒေသခံကျောင်းကအသင်း၏တန်းစီဇယားထဲမှာစာရင်းသွင်းကိုမြင်တော်မူ၏။
အဆိုပါလမ်းဘဝ - ကျောင်းနာရီပြီးနောက်:
ကွာသင်ယူတဲ့သူဘောလုံးသမားများ၏အခြားမျိုးသုဉ်းရန်အန္တရာယ်ရှိမျိုးစိတ်အကြားကျောင်း, Jadon Sancho တဦးတည်းအနေဖြင့်, လမ်းများပေါ်နှင့်နောက်ကျောလမ်းကြား (ဘွန်ဒစ်လီဂါအစီရင်ခံစာ) တွင်ဘောလုံးကစားသူတို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့်ရယူနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာသူကလေးတစ်ဦးအဖြစ်ရာ၌ခန့်ထားပြီမယ်လို့ဆင်းရဲသောသူကိုရွေးချယ်မှုကနေသူ့ကိုပယ်သွားစီးပဲ့ကိုင်သောဘောလုံးကွင်း၌သူ၏ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောအကြောင်းကိုပြော Jadon Sancho တစ်ချိန်ကပြောကြားခဲ့့သည်က ...
"ကြောငျးပွီးနောကျ, ကိုယ့်လမ်းမများပေါ်တွင်ဘောလုံးကစားချင်တယ်။ အားလုံးငါ့ကိုလှည့်ပတ်, "အဲဒီမှာမကောင်းတဲ့အမှုအရာကိုပြု၏သူတွေကိုခဲ့ကြသည်, ဒါပေမယ့်သူတို့ကိုငါနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်လိုခငျြဘယ်တော့မှ သူကတစ်ချိန်ကသူ့ကိုလျော့နည်း savory ပတ်ဝန်းကျင်သို့ချော်ရန်အဘို့အလွယ်ကူပါပြီမယ်လို့ဝန်ခံအဖြစ် Sancho ကဆိုသည်။
Jadon Sancho ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts- အလုပ်ရှာဖွေရေး Buildup
အဆိုပါနေ့ကိုသူ Met Destiny:
တစ်ဦးမင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်တွင်, တောင်လန်ဒန်ကောင်လေး Sancho သူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေများကို Reiss နယ်လ်ဆင်သွားရောက်ကြည့်ရှုမြို့သို့သွား၏ (သူမြားအရေးအသား၏ထိုအချိန်ကအဖြစ်အာဆင်နယ်အသင်းအတွက်ကစား) နှင့်မှ Ian Carlo Poveda (အဘယ်သူသည်အဖြစ်က Man စီးတီးရှိကစား စာအရေးအသား၏အချိန်မှာ) ။ နှစ်ဦးစလုံးမိတ်ဆွေများကိုမိမိအလန်ဒန်နေအိမ်အနီးအနားမှာနထေိုငျအပေါင်းတို့နှင့်ဘောလုံးကစားရန်ထွက်သွားပါလိမ့်မယ်။ ပြိုင်ဘက်ကဲ့သို့အခြားသူငယ်ချင်းများနှင့်အတူတူဘောလုံးကစားနေစဉ်, နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. Sayce Holmes-Lewis ကကအချို့သောလန်ဒန်နည်းပြဒေသဝင်စီးပြီး။ သူနဲ့ကလေးတွေအတွက်အတိုးကိုယူ။ သူကိုမွငျလြှငျအဘယျသို့အကြောင်းကိုပြောကေတီဟုမ်း-Lewis ကဝန်ခံ ...
ဒီကောင်လေးတွေရူးဖြစ်ကြသည်ထင်။ သူတို့ကပဲသူတို့ရဲ့ nutmegs နှင့်သူတို့၏ကျွမ်းကျင်မှုအတွက် telepathic ဆက်သွယ်မှုနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ပြိုင်ဘက်ကြည့်မိုက်မဲအောင်ခဲ့သည်။
ကေတီဟုမ်း-Lewis ကအဆိုပါယောက်ျားလေးများ hyped ပေမယ့်သူတို့ကိုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းရဖို့ကသူ၏ဘောလုံးဆက်သွယ်မှုသုံးစွဲဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ခဲ့ဘူးသာ။
Jadon Sancho ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts- အစောပိုင်းအလုပ်ရှာဖွေရေး
Jadon Sancho သူနဲ့သူ့သူငယ်ချင်းများကိုကေတီဟုမ်း-Lewis ကထဲကနေတယ်အကူအညီနဲ့ခုနစ်ကျေးဇူးတင်စကားနှစ်အရွယ်တွင် Watford ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ကြောင့် Watford ဘောလုံးအသင်းလေ့ကျင့်ရေးမြေပေါ်မှာ Kennington ထံမှ 21.6 မိုင်ခရီးသည်နှင့်အတူပြဿနာများကိုရန်, Sancho Watford ပေးခဲ့သည့်နေရာထိုင်ခင်းရှာခဲ့ရသည်။
မိမိအပညာရေးကိုဆက်လက်အခြားမှာတော့သူ Watford ရဲ့မိတ်ဖက်ကျောင်းမှာတက်ခဲ့တယ် Harefield အကယ်ဒမီ တစ်ဘော်ဒါကျောင်းသားအဖြစ်။
ကေတီဟုမ်း-Lewis က, Jadon နှင့်သူ၏မိတ်ဆွေများကကူညီပေးခဲ့သည်သောသူသည်ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့ရဲ့ Southwark ကောင်စီများအတွက်အသိုင်းအဝိုင်းနည်းပြအဖြစ်အနေအထားရှိခဲ့ပါတယ်။ သူကလန်ဒန်တောင်ပိုင်းရဲ့အရည်အချင်းအရှိဆုံးလေးတွေ၏သူ့အဖွဲ့ထဲမှာ Sancho နှင့်သူ၏မိတ်ဆွေများကလေ့ကျင့်သင်ကြား။ ကေတီဟုမ်း-Lewis က '' ရည်ရွယ်ချက်ကသူတို့ကိုတစ်လန်ဒန်လူငယ်ဘောလုံးဖြစ်ရပ်တွင်ပါဝင်ရန်ရှိသည်ဖို့ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကံကောင်းတာကသူကဂုဏ်သတင်းဖြစ်ရပ်မှာအောက်မှာ-11s ယှဉ်ပြိုင်အနိုင်ရမှ Jadon Sancho နှင့်သူ၏မိတ်ဆွေများကလမ်းပြတော်မူ၏။ အောက်တွင် Sancho သူ့သူငယ်ချင်းတွေဟာသူတို့ရဲ့နောက်တစ်နေ့မှာသူတို့ရဲ့အနိုင်ရတံဆိပ်ရှိခြင်းနှငျ့အတူရှိ၏။ သူဝေးညာဘက်နှင့်ကေတီဟုမ်း-Lewis ကမှအနီးကပ်နေရာယူထားသည်။
11 ၏အသက်အရွယ်မှာ Sancho သူ့ကိုပိုပြီးမှန်မှန်လေ့ကျင့်နှင့်ကျောင်းသွားခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်း Watford ရဲ့ setup ကိုပိုမိုနှစ်သက်ရုံဘာလို့လဲဆိုတော့ချယ်လ်ဆီးနှင့်အာဆင်နယ် join ဖို့အခွင့်အလမ်းတွေကိုချလှည့်လာခဲ့သည်။ ဒါဟာသူကသူကြီးဘယ်လောက်ကောင်းကသူ၏အကယ်ဒမီမှသက်သေပြဖို့စတင်ခဲ့တဲ့အချိန်ပဲ။ Sancho တစ်ဦးနှိမ့်ချလမ်းအတွက်ကိုပြု၏အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပုံ။
သူသည်မိမိအနှစ်လယ်ပိုင်းတွင်ဆယ်ကျော်သက်နှစ်ပေါင်းချဉ်းကပ်ခဲ့သည်နှင့်အမျှ Sancho ၏ YouTube ကိုဗီဒီယိုများမှတဆင့်တောက်၏အလေ့အထစတင်ခဲ့သည် နယ် နှင့် နေမာ။ သူမဟုတ်ဘဲ Watford မှာမိမိကျောင်းကအလုပ်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခြင်းထက်ကြောင်း၏ သာ. ပြု၏။
"ငါသည်သူ၏ screen ကိုအတိတ်လမ်းလျှောက်တစ်ခုချင်းစီကိုအချိန်, သငျသညျ, နယ်သို့မဟုတ်နေမာ၏ဗီဒီယိုအပိုင်းများကိုကျွမ်းကျင်မှုလုပ်နေတာပြသသောစာမျက်နှာကိုကြည့်ပါလိမ့်မယ်" ကပြောပါတယ် လူးဝစ် Lancaster, Watford ရဲ့ထို့နောက်အောက်တွင်-15s နည်းပြ။
တောင်မှသူတို့အပြန်ပြီးတော့ Sancho သိသောမကြာခဏ "သူ့ကိုမခေါ်လိမ့်မယ်ဘောလုံးဖျော်ဖြေရေး"သူသူကကိုးကှယျကစားသမားတွေနဲ့ဆင်တူအရည်အသွေးတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ တစ်ဦးကဝေမလိုဘောလုံးကို manipulate ရန်သူ၏စွမ်းရည်ကိုကင်းထောက်ဆွဲဆောင်ခြင်းနှင့်သူ့ကိုအဆက်မပြတ်ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်အသင်းများက scouted ခံရဖို့ဦးဆောင်ခဲ့သည်။ အဆုံး၌, Jadon Sancho သူ့မိသားစုကိုတိုင်ပင်ပြီးနောက်ကလောင်အမည်မှ 2015 အတွက်က Man City, အတူသဘောတူညီချက်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
Jadon Sancho ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts- Fame မှလမ်း
သူသည်မိမိနာမအဖို့သူတို့ရဲ့အကယ်ဒမီအနိုင်ရလူငယ်ဂုဏ်ထူးနှင့်ဆုအတွက်အထင်ကြီးဆက်လက်ဘယ်မှာ 14 ၏အသက်အရွယ်မှာ Jadon Sancho မန်ချက်စတာစီးတီးသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။
သူကအစာရှောင်ခြင်း-ခြေရာခံ Khaldoon အယ်လ်မူဘာရက် (စီးတီးရဲ့ဥက္ကဌ) ကကလပ်ရဲ့အကြီးတန်း setup ကိုသို့ဖြစ်ခြင်း၏အာမခံတယ်တဲ့သူမြို့တော်ရဲ့အကယ်ဒမီကစားသမားအနညျးငယျတို့တှငျတစျခုဖွစျသညျ။ ဤသည်ဂတိတော်နှင့်စပ်ဆိုင်သောနောက်ဆုံးတော့ခဲ့ပွညျ့စုံခဲ့။
အဆိုပါ Big ဆုံးဖြတ်ချက်အမေရိကန်ခရီးစဉ်:
ဒါဟာစီးတီး 2017 ၏နွေရာသီအတွက်အမေရိကန်နိုင်ငံအတွက်ခရီးစဉ်များအတွက်ထွက်သွားဖို့ပဲယ့်နာရီမတိုင်မီဖြစ်ခဲ့သည်။ လူတိုင်း United States ကိုလေယာဉ်ပေါ်မှပြင်ဆင်ထားခဲ့ပေမယ့်, Jadon ဤအရပ်မှသူခရီးစဉ်မှအဖွဲ့အောက်ပါမည်မဟုတ်ပါတစ်ခုချွင်းချက်ဖြစ်လာရန်သူ၏စိတ်ကိုထစေ၏။
Sancho သူအသစ်တစ်ခုကိုစိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်လိုအပ်သူအတွက်လုံလောက်သောကစားအချိန်ရတဲ့မပင်ပန်းခဲ့ကြောင်းအခိုင်အမာပြောဆိုပါတယ်။ ဤသည်လက်ဝဲ ဂွာဒီယိုလာ သူပြီးသားကိုသူ့အဘို့အသစ်တစ်ခုကိုစာချုပ်ပြင်ဆင်ခဲ့အဖြစ်အံ့အား။ သူဟာတစ်ချိန်ကပိုင်ရှိရာကလပ်ရဲ့လူငယ်အသင်းနှင့်အတူလေ့ကျင့်ရေးကိုဆက်လက်ပြန် လာ. အဖြစ် Sancho သူ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအတွက်အလေးပြသ။
"နောက်ဆုံးနှစ်ခုသို့မဟုတ်သုံးခုရက်သတ္တပတ်များတွင် Sancho သင်တန်းအစည်းအဝေးများပေါ်လာခဲ့ပါဘူး။ သူသညျ လာ. ယူဆပေမယ့်သူမခံခဲ့ရ,"ဟုပြောသည် ဂွာဒီယိုလာ. "ကျနော်တို့ကအများကြီးကြိုးစားခဲ့သည်။ ကျနော်တို့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနှင့်သူ၏ဖခင်, မိခင်နှင့်သူ၏မန်နေဂျာတောင်းပန်ပေမယ့်ကစားသမား '' အဘယ်သူမျှမမျှမျှမျှမရှိ '' ပြောပါတယ်လျှင်, ငါတို့သည်အဘယ်သို့ပြုနိုင်သနည်း "
နောကျမှာသူ့မိခင်နှင့်သူ့နှမထွက်ခွာသည်သူ၏ဂျာမန်စာချုပ်အပြီးသတ်အားမိမိအဖေကို Sean နှင့်အတူခရီးထွက်တဲ့သူ Sancho အဘို့ဤမျှခက်ခဲခဲ့ပါတယ်။
"ငါသည်သူတို့ကိုအများကြီးလက်လွတ်, ဒါပေမယ့်ငါငါ့အဘို့အကောင်းဆုံးဘာလုပ်ချင်တယ်။ ငါ "ဂျာမနီကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ကိုငါ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်အကောင်းဆုံးအရာကြီးနဲ့တူခံစားခဲ့ရ ကပြောသည် Jadon Sancho သူတစ်ချိန်ကသည်သူ၏ဇာတ်လမ်းအဓိကအဖြစ်။
Jadon Sancho ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts- Fame မှထလော့
Sancho သူပထမဦးဆုံးအသင်းကစားသမားများတွင်ပါဝင်သည်မည်ဖြစ်ကြောင်းစာချုပ်သဘောတူညီချက်အောက်မှာ 31 သြဂုတ်လ 2017 အပေါ်ဘွန်ဒစ်လီဂါကလပ်ဒေါ့မွန်များအတွက်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ ဤသည်စာချုပ်သဘောတူညီချက်တစ်ခုအစားထိုးအဖြစ်သူ့ကိုမြင်သူဂျာမန်ကလပ်အားဖြင့်ဂုဏ်ပြုခဲ့သည် Ousmane Dembele.
သူကစပိုင်းတွင်ဂျာမန်ဘာသာစကားသင်ယူခြင်းအတွက်ရုန်းကန်အဖြစ်ဂျာမနီ၌နေထိုင် Sancho ဘို့မလွယ်ကူခဲ့ဘူး။
2018 ၏နွေရာသီမှာတော့ Sancho နောက်ဆုံးတော့မိမိအဟောင်းများကိုကလပ်အားမိမိအမှတ်ကိုသက်သေပြခဲ့သည်။ ဤအချိန်, သူ့ဟောင်းကလပ်, က Man City, ဆန့်ကျင်ဆော့ကစားရန်သူ၏ BVB အသင်းနှင့်အတူအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့သွား။
"ငါသက်သေပြနေတဲ့အချက်နှင့်ငါကောင်းစွာပြု၏ထင်" သူသည်မိမိအ BVB ဘက်စီးတီး 1-0 ချီကာဂိုအတွက်အနိုင်ရရှုံးပြီးနောက်ကဆိုသည်။ Jadon Sancho အရှိဆုံး Electrify ငယ်ရွယ်ကစားသမား, တံဆိပ်ကပ်ခဲ့သူတဦးတည်းဖြစ်လာခဲ့သည်ရှေ့တော်၌ထို 2018 / 2019 ရာသီပေါ် Moving, က "အချိန်မယူတစ်ရှင်ဘုရင်ကကူညီ"ဟုအဆိုပါဘွန်ဒစ်လီဂါ၌တည်၏။
Sancho သည့်ဘွန်ဒစ်လီဂါဖွင့်ဆုတ်တဲ့သူတစ်ဦးရဲ့ dynamic နှင့် standout ကစားသမားဖြစ်ခဲ့သည်။ သူကအောက်ကဗီဒီယိုမှာ display တွေ၏စီးရီးပြီးနောက်ဥရောပရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အကောင်းဆုံးအလားအလာဖြစ်လာခဲ့သည်။
ဤအဖျော်ဖြေပွဲနှင့်အတူ, Sancho နာမတော်အားဖြင့်အင်္ဂလန်ကစားသမားသို့အတင်းအဓမ္မခဲ့သည် ဂါရတ် Southgate။ ကြွင်းသောအရာ, သူတို့ကဆိုသညျကားအဖြစ်သမိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
Jadon Sancho ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts- relationship ဘဝ
Jadon Sancho ချိန်းတွေ့ကားအဘယ်သူနည်း
Jadon Sancho ၏အချစ်သီချင်းသူ့မေတ္တာဘဝကအရမ်းပုဂ္ဂလိကနှင့်ဖြစ်နိုင်သည်ဒရာမာ-အခမဲ့ရိုးရှင်းစွာအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အများပြည်သူမျက်စိများ၏စိစစ်လွတ်မြောက်ရန်။ အရေးအသားစောင့်ရှောက်သည့်အချိန်တွင်အဖြစ် Sancho နိမ့်ချိန်းတွေ့ပရိုဖိုင်း။
Jadon Sancho ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts- ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝ
Jadon Sancho ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝကိုသိရန်ရယူခြင်းသငျသညျအထံတော်၌ပြည့်စုံရုပ်ပုံ get ကိုကူညီလိမ့်မယ်။ ချွတ်စတင်ခြင်းသူတစ်ဦးစိတ်ပိုင်းဖြတ်ခဲ့သူတစ်ဦး, မောင်းနှင်, အပြိုင်အဆိုင်ဇာတ်ကောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ညာဘက်သူ့မြို့လက်ထက် မှစ. , Sancho စင်စစ်စိန်ခေါ်မှုများချစ်ကြောင်းကမ္ဘာကိုသက်သေပြခဲ့သည်။ မိမိအရွယ်တူချင်းအကြားအထံတော်လုံ့လရှိသူနှင့်လှိုင်းလေထန်တစ်ခုခုရဲ့အစဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ဘောလုံးကွင်းဘေးဖယ်, Sancho လည်းရက်ပ်ဂီတကိုသီခငျြးဆိုပါမှချစ်တော်မူ၏။ လာသောအခါသူနှင့်ဤအခွက်တဆယ်ကိုပထမဆုံးတွေ့ရှိခဲ့ခဲ့သည် Aubameyang တစ်ချိန်ကအားထုတ်နှင့်ပျက်လုံးများဂီတ 'ဖို့ rappedMans ဟော့မဟုတ်'' တစ်ဦးကားထဲတွင်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဗီဒီယိုအား Watch;
Jadon Sancho ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts- မိသားစုဘဝ
ထောက်ခံမိဘများရှိခြင်းမရှိမဖြစ်အရေးပါသည်နှင့်အဘယ်သူ၏နာမကိုအမှီ Sean ဖြစ်ပါတယ် Sancho ရဲ့ဖခင်ကျယ်ပြန့်အာရုံစူးစိုက်သူ့သားထားရှိမည်မှသူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးပြုတော်မူပြီသူဖခင်ကောင်းအဖြစ်ဖော်ပြနေသည်။ Sean ပင်သည်သူ၏အလုပ်တွေလည်းထိခိုက်နစ်နာမှာအမြဲ Jadon ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအောင်မြင်မှုရဲ့ဆက်ကပ်အပ်နှံထားသည်။
Jadon Sancho လမ်းကြောင်းအပေါ်တည်းခိုခဲ့သည့်အချက်ကိုသူ့ကိုအနားမှာရပ်လျက်ရှိသည်ဟုသူလည်းမိမိချစ်စရာကောင်းတဲ့မိဘများ, အစ်မတွေနှင့်ဆွေမျိုးသားချင်းများမှခရက်ဒစ်ဖြစ်ပါတယ်။
Jadon Sancho ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts- မရေမတွက်အချက်အလက်
သူကအင်္ဂလန်ကစားရန်ဤထောင်စုနှစ်တှငျမှေးဖှားကိုပထမဦးဆုံးကစားသမားဖြစ်လာ၏စံချိန်အနိုင်ရအဖြစ်အင်္ဂလိပ်ပရိသတ်တွေ Jadon Sancho ဂုဏ်ကျေးဇူးသီဆိုခဲ့။ ဤသည်အောက်တိုဘာလ 2018 အတွက်ခရိုအေးရှားဆန့်ကျင်သည်သူ၏ပွဲဦးထွက်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ အောက်တွင်သူတစ်ဦးလက်ဝါးကပ်တိုင်ပစ်ခတ်မတိုင်မီခရိုအေးရှားနောက်ခံလူ Josip Pivaraic beats အဖြစ်သူ၏ပွဲဦးထွက်ပေါ်အင်္ဂလန်ကြယ်ပွင့်များ၏ဓာတ်ပုံဖြစ်ပါသည်။
အလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးညှိနှိုင်းမှုပြီးနောက်ဒေါ့မွန် Sancho အဆိုပါ 2017 U17 ကမ္ဘာ့ဖလားကာလအတွင်းအိန္ဒိယအတွက်အုပ်စုအဆင့်တွင်ကစားရန်ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ မိမိအခြမ်းယှဉ်ပြိုင်၏နောက်ကောက်ဇာတ်စင်မှချီတက်အဖြစ်ထို့နောက် 17 နှစ်အရွယ်သုံးကြိမ်သွင်းယူခဲ့ကြပါတယ်။ Sancho ကြောင့်သူ့ကို၎င်းတို့၏ကြယ်ပွင့်ယောက်ျား၏န်ဆောင်မှုများလိုအပ်သူကိုဒေါ့မွန်ဖြင့်သင့်ကိုခေါ်ခံရဖို့ပြိုင်ပွဲများ၏နောက်ကောက်ဇာတ်စင်သက်သေခံခဲ့ပါဘူး။ ဒါကသူ့ကိုနာမည်ကြီးလုပ်သူ၏ကလပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်နှင့်သစ္စာစောင့်သိပြသထားတယ်။
သမ္မာကျမ်းအမှန်တရားနေစစ်ဆေးခြင်း: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Jadon Sancho ကလေးဘဝပုံပြင်ပေါင်းမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ဖတ်နေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တွင် LifeBogger, ကျနော်တို့တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်တရားမျှတမှုများအတွက်ကြိုးစားကြသည်။ သင်မှန်မကြည့်ဘူးသောအရာတစ်ခုခုကိုရှာဖွေပါလျှင်အောက်တွင်မှတ်ချက်ခွငျးအားဖွငျ့အကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူဝေမျှပါ။ ကျနော်တို့ကအမြဲသင့်ရဲ့အိုင်ဒီယာကိုတန်ဖိုးထားလေးစားပါလိမ့်မယ်။
ဂျိမ်းရပ်ကွက်-Prowse ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်